ပုံတူရုပ်ပုံရေးနည်းက ဘာကိုလေ့လာတာလဲ။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 28/12/2021 23:49 | အဆင့်မြှင့်တင် 29/12/2021 00:00 | လေ့ကျင့်ရေး
ပုံတူရုပ်ပုံရေးနည်းက ဘာကိုလေ့လာတာလဲ။ ပုံဆွဲပညာသည် ပထဝီဝင်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေပုံများမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာ၏ ကွဲပြားသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမြင်အာရုံကို ကိုယ်စားပြုမှုကို ရရှိနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ မြေပုံသည် အဖြစ်မှန်ကို တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းသော အကြောင်းအရာကို ပြသသောကြောင့် သက်သေပြထားသော အချက်အလက်၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖော်ပြပြီး ဘောင်ခတ်ထားသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ယေဘူယျရှုထောင့်ကနေ ဖော်ပြတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သီးခြားပြဿနာတစ်ခုကို အလေးပေးသည့် အကြောင်းအရာ ဒီဇိုင်းများ ရှိပါသည်။. Cartography သည် ခရီးသွားနယ်ပယ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးချနိုင်သော ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2 သင်ယူမှုဒြပ်စင်တစ်ခုအနေဖြင့် ပုံနှိပ်စက်
4 စာပေတွင် ပုံသေရုပ်၏ အရေးပါမှု
လူတစ်ဦးသည် နေရာကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လာရောက်သည့်အခါ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ ဦးတည်ချက်ထားရန် မတူညီသော အစီအစဉ်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီး အမှတ်အသားပြုသော အမှတ်အသားများ အများဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းအတူ၊ ထိုအချက်အလက်များသည် အကောင်းဆုံးစီစဉ်မှုဖြင့် မြို့တစ်မြို့သို့ရောက်ရှိမည့်အချိန်ကို ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်စေပါသည်။ ခရီးတိုတွင် ခဏတာ တည်းခိုလိုသော ဧည့်သည် အများစုသည် Tourist Office သို့ လာရောက်ကြသည်။. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ ၎င်း၏အလှတရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေရန် ရည်ညွှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်တစ်ခု၊ ကိုယ်ပိုင်ခရီး. ဤအကြောင်းကြောင့် ခရီးသွားများ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းသည် လက်တွေ့ကျသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မြေပုံဆွဲခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအား ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ကိုယ်စားပြုပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းသောအချက်အလက်များကို ပေးပို့သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားမီဒီယာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းပါ။
မြေပုံများသည် ပညာရေးအတွက် လက်တွေ့ကျသော အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော အသိပညာများကို လေ့လာရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို ပေါင်းစည်းရန် အကူအညီပေးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်ကြားရေးနယ်ပယ်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤအယူအဆသည် ပထဝီဝင်နယ်ပယ်တွင် ဘောင်ခတ်ထားကြောင်း ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးသည်။ ထို့ကြောင့်, cartographer သည် လေ့ကျင့်မှု၊ ပြင်ဆင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သည်။ သင်၏မူလရည်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီသောမြေပုံများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန်။ ကောင်းပြီ၊ တင်ဆက်မှုပုံစံသည် သူ့ဘာသာသူ သက်ဆိုင်ပါသည်။ မြေပုံကောင်းတစ်ခုသည် အလှအပကိုလည်း ဂရုစိုက်သည်။
မြေပုံတစ်ခုသည် နယ်မြေတစ်ခုကို ဂရပ်ဖစ်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် သရုပ်မှန်ကိုယ်တိုင်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အမြင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် နေရာတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ စူးစမ်းရှာဖွေမှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလည်း အားပေးသည်။ အသေးစိတ်ပုံစံသည် အကြံဥာဏ်များနှင့် ဒေတာဖလှယ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အထောက်အပံ့တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာအသစ်များ ပေါ်ထွန်းလာသည်နှင့်အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားပြုမှုများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော ရိုးရာအလယ်အလတ်သည် စက္ကူဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။ သို့သော်၊ လက်ရှိတွင် လေယာဉ်တစ်စီးအား မတူညီသောပုံစံတစ်ခုကို ပေးနိုင်သည်။ ပြီးတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံနှိပ်စက်က ရှင်းပါတယ်။. အဆိုပြုချက်နှစ်ခုစလုံးတွင် ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း တူညီသောအနှစ်သာရကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
နောက်ဆုံးအခြေအနေတွင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အကြောင်းအရာအသစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်စေကြောင်း ထောက်ပြသင့်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် စက္ကူပေါ်တွင်ပြုလုပ်ထားသော လေယာဉ်သည် ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားသည်။
စာပေတွင် ပုံသေရုပ်၏ အရေးပါမှု
ပုံတူရုပ်ပုံရေးနည်းက ဘာကိုလေ့လာတာလဲ။ ပုံသဏ္ဍာန် စာပေမှာလည်း အလွန်ပါရှိပါတယ်။ အချို့သော စွန့်စားခန်းဇာတ်လမ်းများသည် မြေပုံတစ်ခုမှ တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့် အံ့အားသင့်မှုများကို ပြသသည်။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို ပျံသန်းခွင့်ပြုဖို့၊ လက်တွေ့ဘဝနဲ့ ပန်းတိုင်အသစ်တွေကို အနိုင်ယူဖို့ အပြင်ထွက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ မြေပုံတစ်ခုပါ။ ထို့ကြောင့်၊ မြေပုံစာအုပ်တစ်အုပ်သည်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် အဆိုပြုချက် သို့မဟုတ် နှစ်သစ်တွင် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအသစ်များကို အနိုင်ယူရန် သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်သည့် အံ့အားသင့်စရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။
Maps သည် ပျော်ရွှင်စရာ ဒိုင်းနမစ်များဖြင့် ကစားပြီး သင်ယူမှုအသစ်များကို ရယူရန် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » ပုံတူရုပ်ပုံရေးနည်းက ဘာကိုလေ့လာတာလဲ။